Soomaaliya oo heshiis la gashay Turkiga - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Soomaaliya oo heshiis la gashay Turkiga
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 December, 2012, 19:53 GMT 22:53 SGA
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay dhiggiisa Turkiga, Madaxweyne Cabdalla Gul, iyo Raiisul Wasaare Recep Tayyip Erdogon.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Turkiga Cabdalla Gul
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay dowladda Turkiga.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyay booqasho ku joogay dalka Turkiga ayaa heshiiska la galay dowladda Turkiga sida uu BBC u sheegay Safiirka Soomaaliya ee Turkiga Maxamed Mursal Sheekh.
Safiirku waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo waxa uu ku saabsan yahay heshiiska oo ku tilmaamay mid militeri.
Safiirku waxa uu sheegay in Madaxweynuhu shalay la kulmay dhigiisa dalka Turkiga, Madaxweyne Cabdalla Gul, maantana uu la kulmay Raiisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogon.
Danjire Maxamed Mursal, Waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga.
Turkigu waxa uu ka mid yahay dalalka taageerada samafal u fidiyay Soomaaliya markii abaaruhu ka dhaceen dalka sanadkii hore.
Dowladda Turkigu waxa sidoo kale ay ka mid tahay dalalka deeqaha waxbarasho ee ugu ballaaran u fidiya ardeyda Soomaaliyeed.
Ilaa 1600 ardey Soomaaliyeed ah ayaa ku sugan oo wax ka barta dalka Turkiga, sida uu sheegay Safiirka.